Xulka – Kaasho Maanka
Diin iyo Damiir
Qaybta: Akhlaaqda, Diimaha, Saynis, Xulka
1964-gii cilmibaaris ay Northwestern University ku sameeyeen Masserman, Wechkin iyo Terris ayaa waxa ay ku bareen daanyeero in ay katiinad jiidaan markay cunno rabaan, kadibna katiinaddii waxay ku program gareeyeen in marka la jiido ay koranto dhaliso. Korantada waxaa lagu dhajiyay daanyeer ku jira qol ku dhagan ka katiinada jiidaya, waxaana loo dhaxaysiiyay labadooda dhalo la iska dhex arko...
W/Q: Maxamed Jaarlees
Qaybta: Diimaha, Saynis, Xulka
Si guud marka loo eego erayga "waaritaan" waxa uu ka dhigan yahay - in nolosha lagu waaro. Waa nolol aan dhammaad lahayn oo dhimasho la'aan ah. Balse marka laga eego dhanka diimaha midba si bay u dhigtaa; doodaha falsafadeed ee ka warrama ruuxda si bay u sharxaan; sayniskuna si buu u arkaa waaritaanka nolosha.
1 2 3 … 6 Bogga Xiga